La kulan – Nin 35 jir ah oo leh cod carruureed | Radio Himilo
Home / Arrimaha Bulshada / La kulan – Nin 35 jir ah oo leh cod carruureed
Posted by: Ahmed Haaddi January 19, 2022
Himilo – Haku kadsoomin wejigiisa. Waayo ninkani wuxuu ku hadlaa codka carruurta. Anderson oo 35 jir ah wuxuu taniyo markii uu soo gaangaaray u hadli jiray sida ilmaha yaryarka ah. Laakiin tani ma ahan xaalad uu bilowgii noloshiisa la qabsaday.
Aalaaba koriinshaha iyo weynida qofka kaliya kuma saabsana muuqa jirka. Taas waa midda aad ka fahmi kartid sheekada aabbahan xaaslaha ah oo ay u joogaan laba carruur ah kuna nool dalka Tansaniya kaas oo aan kaliya codka carruurta oo kale ku hadlin balse sidooda kale u ooya marka wax loo diido.
Markii uu carruurta ahaa wuxuu ahaa codweyne dhawaqiisu ay ka didaan ilmaha kale; wuxuu dhabtii ahaa mid xumaato isku dareemaa. Waayo marwalba oo uu hareerihiisa asxaabtii uu jeclaa la cayaaridooda oo aan in badan dooneyn inay ag joogaan codkiisa weyn awgeed, wuxuu dooni jiray inuuba hadlin ama uu iska yeelyeelo codkooda oo kale. Balse dadaalladaasi uma suuraglin inay ku dhinac ilaaliyaan ama uu ku hanto saaxiibadiisa.
Balse in yar kaddib maanu fileyn inuu dib u heli doono codkiisa carruurnimada goor aanu in badan kamid ahayn carruurta oo uu noqday qof qaangaar ah. Taniyo markaasina wuxuu la kulmay falcelino kala duwan.
Dadku aalaaba way la qoslaan; jecleystaan codkiisa. Isaga ahaanna, waxay u tahay farxad iyo dareen ah inay dadku ku aqbaleen xaaladda uu ku sugan yahay. Hayeeshe taasi kama dhigna in dadkoo dhami la dhacsan yihiin. In kale waxay ku takooraan xaaladda dhifka ah ee lasoo deristay.
Markase si guud loogu kuurgalo, Anderson kaliya ma ahan codka wixii uu kala haray waqtigii carruurnimadiisa. Yeelashada dabeecadda ilmaha iyo jecleysiga waxa ay ku dheelaan ayaa sidoo kale ah mid uu kala siman yahay. Sida ciyaalka kale ayuu jecel yahay in nacnac iyo buufin loo keeno si uu ugu ciyaaro.
Mararka qaarse, wuxuu ku mutaa dhib. Habeen uu saqdii dhexe ka raagay gurigiisa oo uu doonay inuu cid jiif siisa uu raadsado, fal-celintii uu kala kulmay waa mid aan dubaaqiisa ka harin. Mar kasta oo uu dhacdadaas xusuustana, wuxuu fahma inaanu gar iyo shaarbo iyo garbo waaweyn qofka raga ahi wada siin Karin astaantii labnimada – haddaanu codkiisa lagu yiqiin uusan la socon.
Xaaladdiisu in kasta oo ay dhif iyo nadir tahay, haddana xaqiiqdu waxay tahay in 10,000 kun ee qofba mid laga heli karo. Mana ahan codka waxa kaliya ee ka doorsooma. Waa aragga indhaha oo marka ilmuhu yar yihiin aad u bata; kolka ay weynaadaanna sii daciifa.
Dhaqaatiirta ayaa ku taliya inay la socod iyo hubin joogto ah qoysaska la sameeyaan marwalba oo ay ilmaha ku arkaan xaalad aanu la wadaagin ilmaha kale si xilli hore loola tacaalo.
Haddase Anderson wuxuu ku qasban yahay inuu u noolaado sida carruurta – u eegis la’aan in lagu caayo ama loogu garaabo. Xaaskiisa Christina oo ay wada joogaan muddo 7 sano ahna waxaa ka go’an inay seygeeda kula noolaato xaaladda uu ku jiro.
Waayo micno malahan inta qof ee ku jeesjeestay codkiisa marki uu ugu horreysay oo ay maqlaan. Iyadaa ku jecel kuna rabootay taniyo maalintii ay la kulantay. Balse hadda in badan kuma adka inay kala saari wayso codka ilmaheeda iyo midka seygeeda marwalba oo ay gudaha aqalka uga soo dhawaaqaan ama ay usoo garaacaan guriga.
Previous: Maqal– Raxiiqul Makhtuum – Casharka 130aad
Next: Newcastle United oo €50m ku dooneysa Eden Hazard